विराटनगरमा प्रहरीबाट कुटपिट भएपछि स्वास्थ्यकर्मीले मागे सुरक्षा - Arunkhabar.com
विराटनगरमा प्रहरीबाट कुटपिट भएपछि स्वास्थ्यकर्मीले मागे सुरक्षा
प्रकाशित : १९ जेष्ठ २०७८, बुधबार १९:२७
विराटनगर, १९ जेठ । विराटनगरमा ड्युटीमा रहेका प्रहरीले एक जना स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गरेका छन् । कोसी अस्पताल विराटनगरमा कार्यरत सिनियर अहेब अशोककुमार राजवंशीमाथि गय राति ९ बजेतिर विराटनगरकै देवकोटा चोकमा कुटपिट भएको हो ।
राजवंशीले ड्युटी सकेर मधुमारास्थित घर फर्कदै गर्दा प्रहरीले रोकेर अन्धाधुन्ध लाट्टी प्रहार गरेको बताउनु भयो । उहाँको दुवै खुट्टा र पेटमा चोट लागेको छ । मोटरसाइलमा घर जाँदै गर्दा विराटनगरको देवकोटा चोकमा आफूमाथि प्रहरीले अमर्यादित र अमानवीय ढंगले कुटपिट गरेको राजवंशीको गुनासो छ । कोसी अस्पतालनजिक रहेको सुरक्षा अस्पतालमा उहाँको औषधि पसल पनि छ । स्वास्थ्यकर्मीले परिचय पत्र स्पष्ट देख्ने गरी भिरेर हिँडेको देख्दादेख्दै प्रहरीले कुटपिट गर्नु गलत भएको नेपाल चिकित्सक संघ कोसीका अध्यक्ष डा. फरवार्ड सिलवालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी हुँ भन्दाभन्दै दुई जना प्रहरीले कुटपिट गरेको घटना आएको छ । सहकर्मी कुटिएपछि विराटनगरमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले प्रदर्शन गरेका छन् । आज कोसी अस्पताल विराटनगर परिसरमा प्लेकार्डसहित कुटपिटको विरोधमा उत्रिएका उनीहरुले सुरक्षाको माग गरे ।
चिकित्सक संघ कोसीको अगुवाईमा आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकले दोषी प्रहरीमाथि कारबाहीको माग पनि गरेका छन् । उनीहरुले कोरोना महामारीका समयमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभए काम गर्न नसकिने बताए । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दासले कोरोना महामारीमा अग्रभागमा खटिएर संक्रमितको सेवा एवं बिरामीको उपचारमा अहोरात्र खटिने चिकित्सक असुरक्षित हुनु दुःखद् भएको बताउनु भयो । यस घटनाका सम्बन्धमा प्रशासन र प्रहरी कार्यालयको ध्यानआकर्षण गरिसकिएको जानकारी उहाँले दिनु भयो ।
स्वास्थ्यकर्मी कुटिएको घटनाको छानबिन सुरु गरिएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले बताउनु भयो । स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको विषयमा अनुसन्धान थालिएको एसपी खड्काले बताउनुभयो ।
विराटनगरमा अत्याधुनिक बस टर्मिनल सञ्चालन
विराटनगर भन्सारले लक्ष्य भेट्न सकेन
प्रदेश १ बाट ७८ जनाले कोरोना जिते, आज ३० जना डिस्चार्ज
संविधानलाई व्यवहारमा लागु गर्ने कसरतमा छौं : मुख्यमन्त्री राई
प्रदेश नं. १ मा कोरोना भाईरसबाट २८ जना संक्रमित
ग्रामथान १ मोरंगको पहिलो बाल विवाहमुक्त वडा
विराटनगर, ४ बैशाख । मोरङको ग्रामथान १ लाई बाल विवाहमुक्त वडा घोषणा गरिएको छ ।...
विराटनगरमा ४ वटा आकाशे पुल बन्दै
विराटनगर, १४ बैशाख । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी असार मसान्त भित्रमा कम्तीमा ४ वटा आकाशे पुल...
विराटनगर, ६ असार । मोरङको कटहरीका काठ व्यापारीमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ । पुरानो रिसिइवीलाई लिएर कटहरी ३ का ६५...
विराटनगर, ६ असार । नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु नै कमिसनको सेटिङमा...